Oppo dia mampiseho ny F15 amin'ny horonantsary vaovao | Androidsis
Oppo dia mampiseho ny F15 amin'ny horonan-tsary vaovao
Ireo mpanamboatra dia mamoaka fanavaozana marobe amin'ny andalana misy azy isan-taona. Oppo dia te hitazona ny satan'izy io amin'ny alàlan'ny fitaovana fidirana hafa eo amin'ny tsenan'i India, farafaharatsiny izay no navoakany tamina horonantsary iray tamin'ny alàlan'ny sehatra YouTube. Ny telefaona aseho dia antsoina hoe Oppo F15.
Mampiseho ny sary misy ny teny filamatra "Flaunt it Your Way" afaka 30 segondra eo ho eo izay ahitantsika ireo seho samihafa misy tanora maro mandihy ary amin'ny farany dia asehon'izy ireo ny smartphone. Oppo rehefa avy nanambara ny Reno 3 sy Reno 3 Pro mihazona ny lohany amin'ny fandefasana modely hafa manana fahaizana sy amin'ny vidiny ara-toekarena.
Oppo F15 dia kendrena ho ilay Oppo A91 voafidy indray, ny maodely A91 dia natomboka andro vitsivitsy lasa izay tany Shina ary afaka miara-miaina amin'ireo fantsona roa farany, izay tonga eo anelanelan'ny herinandro voalohany sy faharoa amin'ny volana Janoary. Amin'izao fotoana izao dia malina ny mpanamboatra rehefa manome vaovao.
Famaritana azo atao
Raha ny A91, ny F15 dia hametraka efijery 6.4 ″ AMOLED miaraka amin'ny vahaolana Full HD +, chipset Helio P70 ary fakantsary selfie 16 megapixel. Any aoriana dia miakatra fakan-tsary miisa efatra izy: fakan-tsary 48-megapixel, fakan-tsary zoro malalaka, karazana makro ary fakan-tsary lalina.
Amin'io dia tsy maintsy ampidintsika ny batterie 4.000 mAh izay azo averina ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny charger 3.0W VOOC 30 patanty, tsy mihoatra ny 40 minitra. Mamirapiratra amin'ny famolavolana manga maivana ilay fitaovana, dia iray amin'ireo izay ampiasaina amin'ny finday vaovao an'ny orinasa amin'ny taona 2020 ho avy.
Ny fanambarana rehetra dia manondro fa ho hitantsika tsy ho ela izy io, tsy ela akory dia fantatsika ny antsipirian'ny telefaona iray manondro ny elanelam-potoana. Miasa tsy misy fitsaharana ny Oppo raha ny amin'ny fanolorana telefaona ary misy ny fahitana ny sasany amin'ny taona ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Oppo dia mampiseho ny F15 amin'ny horonan-tsary vaovao
Ny fanomezana faran'ny taona tsara indrindra: Amazon Music Unlimited 4 volana latsaky ny 1 euro